China DB Camera amalaphu Ukwenziwa kunye Factory | Jiashun
Yenziwe ngamandla eglasi yefayibha yengubo egutyungelwe sisisombululo se-polyurethane. I-Pu inokumelana nokunxiba okugqwesileyo, ukumelana nokubanda, ukungena komoya, ukumelana nokuguga, ukumelana nomlilo, iipropathi zokungena manzi kunye ne-antistatic. Imveliso kudala isetyenziselwa ukufudumeza imibhobho, umsi kunye nokuthintela umlilo kwiindawo zikawonke-wonke, ukuhombisa ngaphakathi nangaphandle kunye nezinye iindawo ezineemfuno zokukhusela umlilo.
Sinazo ezivenkileni DB Camera amalaphu kubaxumi bethu abaxabisekileyo. DB camera ilaphu itrumpped yento yokwenziwa ephothiweyo yesiseko yelaphu ikakhulu ipholiyesta okanye into yenayiloni engangenisi i-polyurethane coating okanye i-laminate. Ukutyabeka kwe-polyurethane kufakwe kwicala elinye lesiseko, oku kwenza ukuba ilaphu linganyangeki ngamanzi, ubunzima bokukhanya kunye nokulungelelaniswa. Amalaphu ethu asetyenziselwa uMzi-mveliso weZimpahla, iiNgxowa zeMizi-mveliso, iiNgxowa zeMozulu eziGqithisileyo.
3732 + IPU
Icala elinye 20g-25g
Icala elinye 30g
Icala elinye 40g
666 + IPU
I-150g yamacala amabini
3784 + IPU
I-150g emacala mabini
Indlela yokwenza iodolo
1. Ukuvunywa kwesampulu
2. Umthengi uhlawula i-30% yedipozithi okanye i-LC evulekileyo emva kokufumana iPI yethu
3. Umthengi uqinisekisa isampulu yethu
5. Umthengi uvuma isampulu yethu yokuthumela
6. Hlela ukuthunyelwa
7. Umthengisi wenza amaxwebhu ayimfuneko
8. Umthengi uhlawula intlawulo eseleyo
9.Umthengisi uthumela amaxwebhu okuqala okanye akhuphe umnxeba ngeempahla
Sinokubonelela ngokuhambisa ngenqanawa, ukuhambisa umoya kunye nokuhambisa elwandle.
3.liphi ixesha le-LT?
Isekwe kubungakanani bakho, ngesiqhelo kwiintsuku ezingama-7 ~ 30.
Egqithileyo Indwangu yoshishino
Okulandelayo: Umxube we-silicone tape